7 Akanaka Maguta Ekunze Zviitiko MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Akanaka Maguta Ekunze Zviitiko MuEurope
Green parks, Hiking mudungwe munzira mumakomo, uye mamiriro ekunze akasununguka akakwana nekuda kwekunakidzwa kwekunze. Maguta eEuropean cosmopolitan ane zvese saka unogona kuyedza zvese zvekunze zviitiko zvinopihwa ne Europe. Kubva ku cycling ku Amsterdam kusvika kumafashoni muMunich, izvi 7 maguta akanakisa emabasa ekunze muEurope ndiwo yakanakira zororo kuenda.
Rail senga ndiyo zvakatipoteredza ushamwari nzira yokufamba. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train, Iyo Yakanakisa Zvitima Tiketi Webhusaiti Munyika.
1. Akanaka Maguta Ekunze Zviitiko MuEurope: Amsterdam, The Netherlands
Kana guta rakavakwa rakatenderedza rwizi nzizi, unosungirwa kuzorora pazororo. Amsterdam inozivikanwa seguta rinonyanya kufarira bhasikoro muEurope. Kutasva bhasikoro haisi nzira yekufambisa chete asi nzira yehupenyu kune vaunowana.
Kuchovha bhasiketi ibasa rakanaka rekunze muEurope, pakufamba uye kuona. Imwe sarudzo iri kuongorora guta uri muigwa, pasi pemabhiriji anodakadza uye maDutch architini. Munzira, unogona kusvetukira kunwa pane imwe boa cafe kana yekudyira inonakidza nerwizi rweAmstel.
Mhepo nyowani, Denga rebhuruu, uye nekushanduka kwenzvimbo kunogadzira iyo yakakwana mamiriro ekugara unoshingairira uye muchimiro ndiri pazororo.
2. Geneva, Siwizarendi
Switzerland ine iyo maonero akanaka kwazvo mu Europe, uye Geneva yakakomberedzwa nemhando inoshamisa. saka, vagari venzvimbo yacho vanonyanya kushandisa maonero uye nyika dzakavapoteredza, kugara panze uye uchishanda. Semuyenzaniso, Lake Geneva, inozivikanwawo seLake Leman inofarirwa yemitambo yemvura.
Bhoti dzakakwira, hove, kayaking, kushambira kana kufambisa, ingori zviitiko zvishoma zvekunze zvekuita muLake Geneva. Iwe unogona kuhaya chikepe kana kutora chinodhura kufamba nechikepe.
Kana iwe uri munhu wemakomo, ipapo nzira dzeSwitzerland Alps 'ndedzepfupi kutiza kubva kuguta. Gomo cu, Hiking, musasa, uye ski munguva yechando mabasa makuru ekunze kuti unakirwe muGeneva.
3. Akanaka Maguta Ekunze Zviitiko MuEurope: Munich, Jerimani
Munich inogara kune imwe yeakakura mapaki emumaguta munyika, Chirungu bindu. Pasi rakasvibira uye rakasvibira rakakodzera mabasa ekunze, nokudaro kuisa Munich kumusoro kwe 7 maguta akanakisisa emabasa ekunze muEurope.
Mubindu reChirungu, unogona kuramba uchishanda, nokuenda uchimhanya kana kutonhora, pane a Pikicha pedyo nemvura, kugeza kwezuva, uye kushambira. Imwe nzvimbo yakanakisa yekuita kwekunze muMunich rwizi yakagadzirwa nemurume Eisbach, mubindu reChirungu. Iyi inzvimbo inodiwa yemafashoni ekubata mafungu uye kudzidzira kufamba kwawo.
Dusseldorf kuenda kuMunich neTreni
Dresden kuMunich neTreni
Nuremberg kuMunich neTreni
Bonn kuMunich neTreni
Kugara muguta kana kuenda kumaruwa, Vienna iguta rinotyisa remabasa ekunze muEurope. Cruising pane iyo Danube, kana kuenda kunze kwenzvimbo yakabatikana kuenda kuLainzer Tiergarten nzvimbo yekuchengetedza, Vienna ine zviitiko zvakawanda zvekunze zvekupa chero mhando yemufambi.
Kana wafunga kugara pakati, imwe yedzakanakisa nzira kuenda kunoona ndeye Segway kushanya kana kufambisa muchikepe muDanube rwizi. asi, kana uchida kuongorora Vienna senge yemuno, uye Kuwana matombo ayo akavanzwa, ipapo nzvimbo yekuchengetera yakakwana.
25 sq km yemasango uye mhuka dzesango dzakamirira iwe mupaka hombe reguta muVienna. Famba famba, jog, kana kuva nepikicha mune ino green oasis, ichaita yako Viennese zororo rapera.
5. Akanaka Maguta Ekunze Zviitiko MuEurope: Zurich, Siwizarendi
Kana pakakwirira nepamakomo emakomo eAlpine akatenderera, uye dziva rinotyisa riri pamberi, iwe unofanirwa kuve rimwe remaguta akanakisa ekuitira zviitiko zvekunze muEurope. Zurich iguta rinonakidza uye rakajeka, kwaunogona kufamba tora chitima cheSZU kuenda kunhare yekucherechedza. Iyo yekuona shongwe iri paUetilberg, iro gomo rakanaka gomo rine zvinoshamisa kuona kwezvakatipoteredza.
Kana uchida musango, ipapo unogona kukwira kuzasi kuburikidza nzira dzakasiyana siyana dzekukwirisa kubva Uetilberg. Chimwe chiitiko chikuru chekunze muZurich chiri kunakidzwa kurudyi kurwizi, mumutambo webhishi volley kana kungo zorora, kuFlussbad Oberer Letten, nzvimbo yenzvimbo dzeku hangout.
Kana iwe uchida kuzviita sevashanyi muZurich, ipapo rova ​​chikepe muchikepe chakapoterera Limmatschifffahrt icho chinokutora pasi peguta 7 mabhiriji.
Interlaken kuenda kuZurich neChitima
Lucerne kuenda kuZurich neChitima
Lugano kuenda kuZurich neChitima
Geneva kuenda kuZurich neChitima
6. Zvakanaka, Furanzi
Kumhanya kana kunakidzwa nekushambira kwemangwanani mugungwa, ndechimwe chezvinhu zvinowedzera simba. Kunyangwe paunenge uri pazororo, kugara wakashinga uye muchimiro zviyero ne kuravira chikafu chemunharaunda uye kuzvitutumadza. Pamusoro peizvi zvese, inoshanda mamiriro epfungwa inonzwa inoshamisa kana iyo French Riviera ichikuchidzira iwe uye fus nesimba uye vitamini c.
Rakanaka iguta rinoshamisa yemabasa ekunze muEurope. Kutasva bhiza pamhenderekedzo, kushambira, kutsvaga magungwa emakungwa, uye kuva nepikicha zuva ranyura zvese zviitiko zvikuru zvekunze kuti unakirwe neiyo French Riviera.
7. Akanaka Maguta Ekunze Zviitiko MuEurope: Florence, Itari
Florence nderimwe remaguta akanaka kwazvo muItaly. Iwe unogona kuwana iro guta senge vashanyi vese, kana nenzira yakasarudzika uye isingakanganwiki. Kufamba kana kutasva bhiza kuburikidza nemawadhi uye maonero iwawo maviri ekunze ekunze zviitiko muFlorence.
zvisinei, kana iwe uchida kuyedza mbiri dzinoshamisa zviitiko zvekunze, uye mashoma emabasa ekunze ekunze muEurope, wobva waedza unopisa mhepo zibhaluni ndege uye skydiving. Dhizaini yaFlorence nemapaki zvinoshamisa uye maonero kubva kumusoro anozobvisa mweya wako.
Kana iwe uchida kurova chaunga chevashanyi uye kuedza zvitsva zvekunze zviitiko, ipapo Florence iguta rinoshamisa remabasa ekunze muEurope.
Genoa kuna Florence nechitima
Parma kunaFlorence neChitima
Zvekunze Mabasa MuEurope
Europe izere nezvinoshamisa. Pasinei nehuwandu hwenguva dzawakafamba kuenda kuEurope, pane nguva dzose mutambo mutsva. Wedu 7 maguta akanakisisa emabasa ekunze muEurope akanakira vatambi uye vanonakidza kutsvaga-vafambi. Pamusoro pe, kune avo imi munongoda kuongorora yakanaka yekunze uye nharaunda.
pano pa Save A Train, isu tichave tichifara kukubatsira iwe kuti uwane yakachipa pashiri yechitima matikiti kune chero eizvi zviitiko zvekunze.
Iwe unoda kupinza yedu blog positi "7 Akanyanya Maguta Ekunze Zviitiko MuEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/cities-outdoor-activities-europe/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
mabasa frenchriviera outdoor OutdoorActivities Tranride Train Travel traintravelgermany travelitaly travelswitzerland TravelVienna